Taliska Ciidamada Mareykanka Ee Africa Oo Xaqiijiyey xog ay ka gaabsatay Dowladda Federaalka [Warbixin]. – Shabakadda Amiirnuur
September 13, 2018 7:09 pm by admin Views: 49
Military-ga Mareykanka ayaa sheegay in ciidankooda iyo saaxiibadooda Soomaalida ay la kulmeen weerar xooggan xilli ay doonayeen in ay halkaas howlgal ka fuliyaan, Iyagoona sheegay in ay dagaalyahanada soo weerartay isaga caabiyeen weeraro xagga cirka ah oo ay goobta ka fuliyeen.
Talisku wuxuu sheegay inaanu jirin hal askari oo ciidamada Mareykanka kaga dhintay ama kaga dhaawacmay weerarka balse waxay sheegeen inuu jiro khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray maleeshiyaatkii Soomaalida ee la socday.
Waxay sheegeen in weerarkaas lagu dilay hal askari oo Soomaali ah, laguna dhaawacay labo kale balse ciidankoodu bad-qabaan.
Talisku wuxu sheegay inuu fuliyey duqeyn xagga cirka ah oo ay ku difaacayeen ciidankooda ku dhacay kamiinka, ayna weerarkaas ku dileen laba askari oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee kamiinka dhigay kuna dhaawaceen mid kale.
Xarakada Al-Shabaab oo isla shaleyba la soo degdegtay warka ah in ay fashilisay weerar ay soo qaadeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ayaa sheegtay in ay weerarkaas ku dishay qaar ka mid ah askartii duullaanka soo qaaday, kuna ganiimeystay hubka iyo agab ciidan.
Dad goob joogayaal ah ayaa sidoo kale SomaliMeMo u sheegay in ay arkeen meydadka laba askari oo ay ka carareen ciidamadii duullaanka soo qaaday kuwaas oo ku labisnaa dareeska lagu yaqaano ciidamada gaarka ah ee dagan saldhigga Bali-Doogle.
Ciidamada Mareykanka ayaa badanaa marka ay fulinayaan duullaanada dheelmadka ah waxay iska soo hormariyaan maleeshiyaatka Soomaalida kuwaas oo ay isaga sahmiyaan kamaa’inta iyo qaraxyada Al-Shabaab.
Wixii ka dambeeyey markii Askariga Mareykanka ah lagu dilay weerarkii Daaru-Salaam bishii Febraayo ee la soo dhaafay, ciidamada Mareykanka waa laga mamnuucay in ay tagaan furinta hore ee dagaalka, waxaana dowrkoodu uu yahay kaliya ximaayo iyo in ay hagaan diyaaradaha Drones-ka ee caawiya ciidamada fulinaya howlgaladaasi.